Uthotho olukhuthazwe 'yiShining' eyalelwe i-HBO Max
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Uthotho olukhuthazwe 'yiShining' eyalelwe i-HBO Max
by Waylon Jordan Aprili 16, 2020
by Waylon Jordan Aprili 16, 2020 1,521 imbono
I-HBO ikhupha zonke iindawo zokumisa umxholo omtsha we-HBO Max ezayo, iqonga lokusasaza elimiselwe ukumiliselwa ngoMeyi 2020, kwaye ngokokuhluka, eziza kubandakanya uthotho olutsha olusekwe kwi nokudangazela zibizwa Ukujonga.
Umboniso uya kwenziwa kunye UJJ Abrams kunye nenkampani yakhe iBad Robot Productions.
Ukujonga Kuya kuthiwa uhlolisise amabali angachazwanga ehotele iOverlook njengoko ibhaliwe nguStephen King kwinoveli yakhe yowe-1977, nokudangazela. Amaziko amatsha kusapho oluthathe umsebenzi wokukhathalela umnini wehotele ngeenyanga zobusika. Nangona kunjalo, bakhawuleza bafumanise ukuba ihotele yiyo hayi kwakhona ungahlalwa mntu.
Mhlawumbi, yenye yezona zinto zidumileyo zomsebenzi kaKumkani kwikhondo eliye lazala iiklasikhi ezininzi. Wayisekela inoveli kwimbali kwaye waxela ukuba wayethimba ihotele iStanley kwilali yase-Estes Park, eColorado.
Le inye kuphela kuthotho lweAbrams kunye neBad Robot evelisa inkonzo yokusasaza. Bakwasebenza ngoku Ubulungisa buvuza ubumnyama, yaye Duster, uthotho lwedrama yantlandlolo.
I-HBO Max isetelwe ukumiliselwa kwinyanga ezayo ngekhathalogu enkulu yemiboniso bhanyabhanya kunye nomxholo wokuqala kuyo yonke i-14.99 yeedola ngenyanga, ixabiso elifanayo njengokubhaliswa kwe-HBO Go kwangoku. Ababhalisi abasele bebhalisele i-HBO Go, baya kuba nakho ukuphucula ukuya kuMax ngosuku lokuqalisa.
Ngaba wonwabile lithemba lolu ngcelele? Sazise ukuba ucinga ntoni ngezimvo!